Man United oo u gudubtay afar dhamaadka tartanka FA Cup kaddib markii ay guul ka gaartay kooxda Norwich City… +SAWIRRO – Gool FM
Dajiye June 27, 2020
(England) 27 Juun 2020. Manchester United ayaa u gudubtay afar dhamaadka tartanka FA Cup kaddib markii ay guul kaga gaartay kooxda Norwich City 1-2, kulan qeyb ka ahaa wareega siddeed dhamaadka ee tartankan.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray bar-bardhac 0-0 ah oo ay isku dhaafi waayeen labada kooxood.
Daqiiqadii 51-aad Manchester United ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta, waxaana 0-1 ka dhigay Odion Ighalo.
Laakiin daqiiqadii 75-aad Norwich City ayaa la timid goolka bar-bardhaca, waxaana 1-1 ka dhigay Todd Cantwell, iyadoo uu goolkan uu caawiyay Emiliano Buendia.
Waqtigii loogu tala galay ciyaarta ee 90-ka daqiiqa ayaa wuxuu ku soo idlaaday bar-baro 1-1 ah, waxaana loo baahday in ciyaarta lagu daro 30 daqiiqo dheeri ah si loo kala saaro labada kooxood.
Daqiiqadii 118-aad waqtigii dheeriga ahaa ee lagu daray ciyaarta kooxda Manchester United ayaa hogaanka u qabatay dheesha waxaana 1-2 ka dhigay Harry Maguire, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Anthony Martial.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 1-2 ah ay kaga adkaatay Manchester United kooxda Norwich City, guushaan ayaa ka dhigay in Unitedka ay u gudubtay afar dhamaadka tartanka FA Cup-ka.
Kooxda Celta Vigo oo taako ugu dhigtay Barcelona garoonka Abanca Balaidos … +SAWIRRO